Daad-biyo ah oo ku fatahay Boosaaso, Gaadiid ay qaadeen & Isku socodka oo halis laga sheegay.
BOOSAASO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in ay 3 baabuur oo ahaa safar siina galayay magaaladaas ay biyo ka qaadeen jidadka, waxaana soo rogmaday daad xoog leh oo maraya goobaha biyo-mareenada ah, sida ay PuntlandTimes u sheegeen laamaha Ammaanka.
Taliska qeybta Booliska ee gobalka Barri ayaa u sheegay Warsidaha PuntlandTimes in ay badbaadiyaan rakaabkii saarnaa sadex baabuur oo safar ahaa, isla markaasna ay biyuhu qaadeen gaadiidkii, waxayna sheegeen in ay wali wadaan gurmad u fidinta dadka dhibaatadu soo gaartay.
Daad biyo ah ayaa kusoo rogmaday goor dhaw oo caawa ah magaalada Boosaaso, waxaana la arkayay Togaga biyaha ee agagaarka magaalada oo ay socdaan biyo xad-dhaaf ah, waxaana 24 saac ee lasoo dhaafay da’ayay roobab xoog leh.
Daadkan, ka sokow waxaa wali jira biyo xoog leh oo ka jira dhinaca gobalada Barri iyo Gardafuu, waxaana aan jirin xog dheeraad ah oo dhan, ilaa hadda.
Ma jirto tirokoob rasmi ah oo laga hayo khasaaraha rasmiga ah ee ay roobabkan geysteen, waxaana ilaa hadda wararku sheegayaan in wadooyinka qaarkood halis badan ay ka jirto, gaar ahaana wadada dheer ee laamiga ah.